कोरोनाअघि आर्थिक संकटमा परेको सौर्य एयरलाइन्सको पुनरागमन! :: Setopati
कोरोनाअघि आर्थिक संकटमा परेको सौर्य एयरलाइन्सको पुनरागमन! एक नयाँ जहाज भित्रिइसक्यो, थप तीन ल्याइँदै
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, मंसिर ७
चरम आर्थिक संकटका कारण कोरोना महामारी सुरू हुनुअघि नै उडान बन्द गरेको सौर्य एयरलाइन्सले यातायात तथा बजार खुलेसँगै उडान सुरू गरेको छ। यति मात्र होइन, थप जहाज खरिदको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
महामारीका कारण कयौं एयरलाइन्स चरम आर्थिक संकटमा परिरहेका बेला सौर्यले भने आक्रमक विस्तारको योजना बनाएको छ।
सन् २०१७ देखि सञ्चालनमा आएको एयरलाइन्सले दुइटा बाहेक अर्को जहाज थप्न सकेको थिएन। महामारी अघिसम्म दुईबाट तीन जहाज बनाउन त सकेको थिएन नै, जहाज मर्मत गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। यस्तो नाजुक अवस्थामा पुगेको सौर्यले लकडाउन क्रममै सिआरजे- २०० जहाज भित्र्याइसकेको छ। हाल त्यही एउटा जहाजबाट उडान गरिरहेको छ।
एयरलाइन्ससँग पहिले भएका दुई जहाजका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा आउने क्रममा रहेको र अबको २/३ महिनामै ती जहाज सञ्चालनमा ल्याइसक्ने एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल भट्टराईले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
तत्काल तीन जहाजबाट उडान भर्ने घोषणा गरेको व्यवस्थापनले थप तीन जहाज किन्ने योजना बनाएको छ। जहाज थप्‍न सौर्यले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट उडान विस्तार अनुमति पनि पाइसकेको छ।
सौर्यले ल्याउने थप जहाज भने सिआरजेका हुने छैनन्। भट्टराईका अनुसार एटिआर ल्याउने योजना छ। नेपालको आन्तरिक बजारमा जेट इन्जिन जहाजले एटिआरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने निष्कर्ष पुगेरै एटिआर ल्याउन लागिएको भट्टराईको भनाइ छ।
'हामीले अब ल्याउने जहाज एटिआर हुन्। अहिले भएका सिआरजे पनि हाम्रो उडानमा हुन्छन् तर लामो रुटमा मात्र सञ्चालन हुन्छन्,' उनले भने।
काठमाडौंबाट धनगढी, नेपालगञ्ज तथा भद्रपुर जस्ता गन्तव्यमा जेट जहाज भए पनि अरू गन्तव्यमा एटिआर उडाउने सौर्यको योजना छ।
अबको एक वर्षभित्र ५० सिट क्षमताका तीन सिआरजे र ७२ सिट क्षमताका तीन एटिआर जहाजसहित आन्तरिक हवाइ उडान बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने योजना रहेको पनि भट्टराईले बताए।
यसै पनि हामीकहाँ उड्डयनको सानो बजार, त्यसमा पनि यसअघिकै स्थापित र ठूला एयरलाइन्स थला परेको अवस्थामा सौर्यले कसरी 'कमब्याक' गर्ला भन्ने प्रश्नमा प्रबन्ध निर्देशक भट्टराईले भने, 'हामीले गएका केही वर्ष बजारको राम्रो अनुभव लिएका छौं। अबको समय हामी त्यो अनुभवलाई आरामदायी तरिकाले उपयोग गर्नसक्ने अवस्थामा छौं। र, हामीले पूर्ण सेवा सञ्चाल गरिसक्दा बजार र हामी सुरूआती अवस्थामा हुन्छौं।'
अहिलेका तीन जहाज तथा ल्याइने तीन जहाज एकैपटक सञ्चालन हुने अवस्थासम्म पर्यटन पनि लयमा आउने र आन्तरिक उड्डयनको बजार उकालो लाग्ने उनको विश्वास छ। त्यही बेला ठूलो दायित्व पनि नभएको सौर्यको व्यवस्थापनले प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने अनुमान गरेको छ।
सौर्यको दोस्रो इनिङ: भारतीय ग्रुपको प्रवेश
विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा रहेका करिब दर्जन व्यवसायीहरूले २०७१ सालमा संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको सौर्य एयरलाइन्सको पहिलो जहाजबाट चार्टर्ड उडान गर्नेबेलासम्म आर्थिक अवस्था राम्रै थियो। जब उसले दोस्रो जहाज ल्याएर 'सेड्युल' उडान थाल्यो, आर्थिक अवस्था खराब हुन थाल्यो।
अवस्था खराब भएपछि विमानस्थल पार्किङ शुल्कको बक्यौता समेत थपिँदै गयो। एयरलाइन्सले कालान्तरमा सञ्चालन लागतमा पनि अभाव झेल्न थाल्यो। त्यही बेला भएका लगानीकर्ता पनि बाहिँरिदै थिए।
त्यही बीचमा विभिन्न व्यवसायीहरू नयाँ लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिने र बाहिरिने क्रम चलिरह्यो। तर एयरलाइन्सको अवस्थामा खास सुधार आएन। कोरोनाअघि भएका दुवै जहाज प्राविधिक रूपमा उडान गर्न नमिल्ने अवस्था भएपछि उडान स्थगन गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
उडान स्थगित भएसँगै सौर्यमा भारतीय लगानीकर्ता कुबेर ग्रुपको प्रवेश भयो। उक्त ग्रुपको प्रवेशसँगै सौर्यले पुन: उडान सुरू गर्ने योजना बनाएको थियो। त्यही बीच कोरोना महामारी आएपछि अहिले आएर उक्त प्रक्रिया सुरू भएको छ। सौर्यले ल्याएको पछिल्लो सिआरजे जहाज कुबेर ग्रुपको प्रवेशपछि आएको हो।
४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा आएको भनिएको कुबेरको विदेशी लगानी अनुमतिको प्रक्रिया भने अझै सकिएको छैन। व्यवस्थापनमा अझै पनि पुरानै समूह सक्रिय भए पनि कुबेरका प्रतिनिधिले काम सुरू गरिसकेका छन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, मंसिर ७, २०७७, १३:५७:००
जो लकडाउनपछि तरकारी किन्न बजार गएकी छैनन्
बाइडेन र पुटिनबीच टेलिफोन वार्ता
कांग्रेसको निष्कर्ष: ओलीले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा राखेनन्
साना-साना सामान बनाउने आमाछोरी
मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले जबरजस्ती गरेको भन्दै न्यायाधीश कार्की बाहिरिएपछि…
इसेवा खाता खोल्नेको संख्या ४० लाख नाघ्यो
प्रदेश नम्बर १ मा आइएमइ भरोसा कोशको रकम वितरण
ओ, नौजवान साथीहरु हो! राजकुमार बस्नेत
अब त बहाना धेरै भो नि कोरोनाको अच्युतमान सिंह प्रधान 'उत्सुक'